HomeWararka MaantaWorld Cup with 48 teams – Musharax Figo Oo Ku Ololeynaya Inuu 48 wadan Gaadhsiinayo Ka Qayb Galka Koobka Aduunka
Luis Figo ayaa ku rajo weyn inuu balaadhin doono tirada wadamada ku hirdama koobka aduunka haddii isaga loo doorto inuu jagada madaxweynenimo ee Fifa ka bedelo Sepp Blater .
Isagoo waxyaabaha uu qaban doono iyo borobogaandihiisa ka jeedinaya garoonka Wembley Stadium, halyeygii hore ee xulka Portuqal wuxuu daaha ka fayday inuu ka kordhin doono tirada 32 ka wadan ah ee hada ka soo qayb gasha ciyaaraha koobka aduunka kana dhigi doono 40 ama ka kordhin doono oo ku tallo galkiisu yahay inuu ka dhigo 48 wadan.
Figo, oo 42 sanno jir ah ayaa kamid ah saddex musharax oo doorashada 29 May dhacaysa kula loolami doona gudoomiyaha wakhtigan ee Fifa, Blatter.
Gudoomiyaha xidhiidhka kubada cagta wadanka Holland, Mr. Michael van Praag iyo ninka iska leh dhaxalka Boqortooyada Jordan ee Prince Ali bin Al Hussein ayaa sidoo kale kamid ah murashaxiinta jagada madaxweynaha xidhiidhka kubada cagta aduunka.
Xidigii hore ee naadiyada Barcelona, Real Madrid iyo Inter Milan baasha uga ciyaari jiray ee Figo, oo laba koob aduun ka qayb gallay intii uu ciyaaraha ku soo jiray , wuxuu khudbadiisa ku sheegay inuu 40 wadan ama laba Group oo min 24 ah oo isreeb reeb ku kala hadha iyagoo laba qaaradood wakhti isku mid ah ku kala ciyaarayaa ka qayb galli doonaan haddii uu soo baxo.
“Waxaan doonayaa inaan arko tiiyoo ay korodhay tirada wadamada ka soo qayb gallaya koobka aduunku. 40 wadan oo 8 group loo qaybiyo oo hormo kastaa 5 kooxood tahay ama 48 wadan oo 24 kiiba Group la isugu geeyo oo ay ku ciyaaraan qaarado kala duwan”. Labadan nidaamba waxay suurto gal ku noqonayaan oo ku soo afjarmayaan iyadoo saddex ama afar cisho oo qudha lagu kordhinayo wakhtigii koobka aduunku socon jiray . Haddii ay hirgashona waxaan rajaynayaa in wadamo aan Yurub ahayn oo kale fursad u helli doonaan ay kaga soo qayb galaan” ayuu Figo yidhi isagoo sharaxaya ajandihiisa.
“Kubada cagtu waxay ii ahayd farxad gelliyahayga tan iyo markii aan barbaarka ahaa. Waxaanan ku nasiib badnaa inaan hello isla iyadii oo bilaabo tababarkeeda anigoo wali aad u yar. Waxa murugo ah, Inay jiraan carruur aad u badan oo ku kala nool dunida dacaladeeda oo aan hellin fursadaas aan hellay oo kale. Qorshahayga haddii la ii doorto madaxweynaha FIFA waxa weeye inaan u damaanad qaado wiilashaas iyo gabdhahaas badan inay hellaan fursad la mid ah ta aan hellay oo kale”.
Luis Figo Musharixiinta La Tartamaysa Michael van Praag (bidix), Prince Ali bin al-Hussein (labaad midig) iyo Sepp Blatter
Liverpool Oo Cadho Kaga Jawaabtay Dalab Aanay Ku Qancin Oo Sakho Laga Soo Gudbiyey
30/08/2017 Abdiwahab Ahmed
Marouane Fellaini Oo Ku Guntaday Man United + Sawiro
Pogba Waxa Uu Noqon Doonaa Xiddiga Dunida Ugu Fiican – Ferdinand